(Axmed Madoobe) caalamka daacad kama ahan dagaalka ka dhanka ah Ururka Al Shabaab – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa sheegay caalamka inaysan daacad ka aheyn dagaalka ka dhanka ah Ururka Al Shabaab ee Somaliya ka socda.
Axmed Madoobe wuxuu sheegay hadii qorshaha uu yahay dagaalka Shabaab in hal maalin lagu soo afjaro in la soo gaba gabeyn karo, balse aanan la dooneyn in Shabaab laga adkaado ama dagaalkooda la soo afjaro.
Waxa uu sheegay Shabaab noolanshahooda inay tahay arin heshiis lagu yahay, marka la eego sida aanan wanaagsaneyn ee dagaalka Shabaab uu socdo iyo farsamo xumada loo wajaho.
“Shabaab inay noolaadaan waa wax heshiis lagu yahay maanta ciidanka Jamhuuriyada Somaliya, Dowlad Goboledyada iyo Amisom-ta joogta marka la isku daro hub cul culus Shabaab kuma gaaraan, inay noolaadaan Shabaabka sow xaalka iskama noqonaayo, Shabaab in lala dagaalamo heshiis malagu yahay sidee in loola dagaalamo heshiis loogu yahay maanta waxaa arkeysaa Buulo burde ayaa dagaal ka dhacay Amisom iyo Somalida wada socday ayaa lala dagaalay.”
Axmed Madoobe ayaa isweydiiyay sababta diidaysa in hal maalin dagaal adag Shabaab lagu qaado oo dhinac kasta leh, kadibna laga adkaado.?
“Maxaa diidaayo dhowr iyo labaatan kun oo Amisom ah iyo Sodonkun oo Somali ah hal maalin in dagaal toos ah la qaado oo meel kasta laga qaado maxaa diidaayo oo nalagu caawiyo oo sidaasi Shabaab loola dagaalamo oo geed hoostiisa looga tago maxaa diidaayo, inta barnaamijka uu yahay tuulo dagaal laga qaado, hadana sanad kadib dagaal kale tuuladaasi laga qaado, ciidan Amisom ayaa meel dagaayo oo sanado ku qaadanaayo Shabaabka iyaga qiyaarka iska leh oo xilliga ay rabaan ku soo weerari karo.”Ayuu yiri Axmed Madoobe oo la hadlay Wakaalada Wararka SONNA.
Ciidamada Amisom oo haysta qalab casri ah oo dagaal iyo ciidanka Dowladda oo taageero dhanka Millateriga iyo qarashkaba ka hela Beesha caalamka, ayaanan horumar badan ka sameynin dagaalada ay kula jiraan ciidamada Shabaab.
Al Shabaab ayaanan haysan ciidan iyo awood Millateri oo ay ugu babac dhigi karaan dagaalka ay kula jiraan ciidamada Amisom iyo kuwa Dowladda, balse sida uu Hogaamiyaha Jubbaland sheegay waxaanan jirin daacadnimada dagaalka Shabaab.
Wasiirka Warfaafinta Puntland oo Wariyeyaasha ugu hanjabay xabad iyo dil